Dilal Qorsheysan Oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho - Horn Cable TV
0	Apriil 16, 2018 9:09 am
Gelinkii dambe ee shalay ayaa muqdisho waxaa kooxo hubeysan ay ku dileen Sarkaal ka tirsanaa Laanta dembi-baadhista Ciidanka Booliska Soomaaliya, Waxana la sheegay in dablaydii weerarkaasi gaysatay ay baxsadeen.
Dilka lagula kacay Marxuunkaasi oo lagu Magacaabi Jiray Xasan Dheere ayaa waxa la sheegay inay ka danbeeyeen kooxo dhalinyaro ah oo aan haybtooda la garanaynin.
Ciidamada Amaanka Magaalada Muqdisho ayaa hawlgalo ka sameeyey agagaarka Goobta uu dilkaasi ka dhacay oo waxa yar u jirtay Xarunta Degmada Waxaa deg deg ugaaray Ciidamada amniga, haseyeeshee lama sheegin in baadhitaankaasi dad lagu soo qaqabat iyo in kale.
Dhinaca kale Kooxo hubeysan ayaa xalay Xaafada Odweyne ee degmada Deeyniile Gobolkan Banaadir waxa ay ku dileen Nin la Sheegay in uu barre ka ahaa mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho .
Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda ayaa goobta gaaray wallow aysan ku guuleysan in ay gacanta ku dhigaan dadkii ka dambeeyey dilka Wiilkaasi Dhalinyadra ahaa oo la sheegay in uu ahaa Macalin Jaamacadeed.
Dilalkan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xili ay socodaan dadalo la doonayo in lagu adkeeyo amaanka magaalada ku waasi oo ay ka wada qayb qaadanayaan Madaxda ugu saraysa Soomaaliya , Ciidamada Booliska iyo dadka shacabka ahiba.